Izizathu ezi-5 zabakhangisi be-B2B zokuhlanganisa amabhothi kucebo labo lokumaketha nge-Digital | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 19, 2020 NgoMgqibelo, Disemba 19, 2020 U-Alex Chris
I-intanethi ichaza kahle ama-bots njengezicelo zesoftware ezisebenzisa imisebenzi ezenzakalelayo yezinkampani nge-inthanethi.
Ama-Bots abekhona isikhathi eside manje, futhi aguqukile kulokho abeqala ukuba yikho. AmaBots manje anikwe umsebenzi wokwenza imisebenzi eyahlukene yohlu lwezimboni ezahlukahlukene. Akunandaba noma ngabe siyalwazi ushintsho noma cha, ama-bots ayingxenye ebalulekile ye- ukuxuba kokumaketha okwamanje.
Amabhothi ahlinzeka ngesisombululo esifanele semikhiqizo efuna ukunciphisa izindleko nokwenza ngcono ukusebenza kahle. Uma u qala ibhizinisi online futhi ungene kwezentengiso ezidijithali, ungahle uchithe imali eningi ungahlosile kwezokukhangisa, ezokukhangisa, ezokuthengisa kanye nezimpendulo kunalokho okufanele ukwenze. Amabhothi ashibhile kakhulu ukusethwa futhi angahlelwa kalula.
Ngenxa yokusebenzelana kwabo okulula nokugcina, ama-bots wokumaketha ayindlela edumile ye- okuzenzakalelayo kwabathengisi namuhla. Amabhothi empeleni ithoyizi lakho lokumaketha elingalungiselelwa ukwenza noma yimuphi umsebenzi owufunayo kubo.
Iphutha lomuntu liyancishiswa futhi ukusebenza okusebenzayo ubusuku nemini kuqinisekisiwe ngokusebenzisa i-bot.
Ingabe ufuna izindlela zokusebenzisa umkhankaso wakho wokumaketha wedijithali futhi unciphise amaphutha?
Ngabe ukhuthazwe yizinzuzo ezinikezwa ama-bots?
Uma kunjalo, khona-ke usesandleni esifanele.
Kulesi sihloko sibheka izindlela okungenzeka ukuthi abathengisi be-B2B bangalandela ukufaka ama-bots ngaphakathi kwecebo labo lokukhangisa ledijithali.
Funda le ndatshana bese unquma indlela osebenza ngayo ukuze uthole ikusasa elisebenza kahle nelingabizi kakhulu.
Isizathu 1: Sebenzisa amaBots njengethuluzi Lokuxhumana Nezivakashi
Lesi ngesinye sezenzo zebhodi ezibhalwe phansi nezithandwa kakhulu ongakhetha kuzo. Le nqubo ingathatha umthwalo omkhulu womsebenzi ezandleni zakho futhi ingakulungiselela izinzuzo ezizokuza.
Ukumaketha kwedijithali kuguqule indlela imikhiqizo ekhulumisana ngayo namakhasimende okokuqala ngqa.
Ukuxhumana ubuso nobuso akuseyona into ejwayelekile, futhi amabhizinisi asetha umbono wabo wokuqala ku-inthanethi ngokubuka kwewebhusayithi yabo nangokuqukethwe okukhona kuyo.
Lapho amakhasimende eza okokuqala kuwebhusayithi yakho, akadingi nje kuphela imidwebo efanele ne-aesthetics, kepha futhi badinga lonke ulwazi olufanele abanikezwe lona.
Ngamafuphi, bazofuna izimpendulo zemikhiqizo namasevisi owanikezayo, kanye nemininingwane yanoma iziphi izaphulelo ezifanele noma ama-promos. Ukwehluleka kwakho ukubanika lezi zimpendulo kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe yikhasimende.
Ukusiza bonke abathengi abangaba khona kuyinto ebaluleke kakhulu okungaba nzima ukuyigcina nokuyiphatha lapho uneqembu elincane lokuthengisa noma lokusekela.
Futhi, iqembu lakho lizoba namahora wokukhetha akhethiwe, ngemuva kwalokho amakhasimende abengeke abe nomuntu ozophendula imibuzo yawo.
Ukunikeza abasebenzi bakho amahora ahlukene okusebenza kungasho ukuthi kuzodingeka unciphise amandla atholakala ngesikhathi esisodwa.
Lokhu kuzokuvimbela ukusebenza kahle futhi kuzokwenza ungakwazi ukuphatha ukungena kwamakhasimende afuna ukubuza imibuzo.
Kungase kusimangaze kubakhangisi abaningi besikhathi samanje, kepha amakhasimende ayayazisa ngempela ingxoxo ebukhoma ephendula imibuzo yabo.
Ucwaningo lwakamuva olwenziwe yi-Econsultancy luthole ukuthi cishe 60 amaphesenti abantu bakhetha ingxoxo ebukhoma kuwebhusayithi.
Ungaqhubeka nokwenza imiyalezo ngokusebenzisa ama-bots enziwe waba ngowomuntu ngokusebenza kuzimpendulo.
Buza imibuzo bese uthuthukisa izimpendulo ezihambisana nomkhiqizo wakho nodumo lomkhiqizo.
Abantu mancane amathuba okuthi basebenzisane nebhodi eqinile engabamukeli ngempela. Ungenza i-bot yakho yamukele ngokwengeziwe ngokunikeza isithombe sephrofayela nesithombe sokubonisa.
Lezi zengezo zizothuthukisa ukuxhumana phakathi kwe-bot yakho namakhasimende ngokwenza ukuthi kusebenzelane kangcono.
Ukukhuluma ngokusebenzisana, i-chatbot kaSephora iyisibonelo esihle se-bot esisebenzisana kahle namakhasimende. Ithoni esetshenziswe yi-bot iyabandakanya futhi isiza amakhasimende ukuthi avale isivumelwano sabo.
Isizathu 2: Sebenzisa amaBots ukuze uhlunge ukuhola kwakho
Ukuphathwa kwabaholi kungumsebenzi onzima abaphathi namaqembu wokumaketha okufanele bawuphathe. Yonke inqubo isuselwa kumzwelo wemvelo nokwahlulela kwakho.
Njengelungu lethimba lakho lokumaketha, kufanele uqiniseke ukuthi ushaya ucingo olufanele mayelana nokuthi yini eholela ekuphishekeleni ngokuphikelela, nokuthi yikuphi okufanele ushiye.
Ngokusebenzisa izingxoxo zengevu, ungangeza isibambiso esiningi kakhulu kulezi zingcingo. Imvelo ingakhombisa ukuthi ayilungile, kepha ama-analytics aqhutshwa ama-chat bots ukuze athole ukuhola akuvamile ukuthi angalungile.
Cabanga ukuthi ikhasimende elisha liza kuwebhusayithi yakho eku-inthanethi. Abanye kungaba ukuthenga iwindi, abanye bangaba nentshisekelo yangempela.
Ukugcina amandla okuguquguquka nobuningi bamakhasimende akho engqondweni, ungahlela uhlu lwemibuzo ethokozisayo ukunquma ukuthi ngabe ikhasimende lakho lingaphakathi kwe- ukuthengiswa kwemfucuza noma cha.
Izimpendulo ezinikezwe le mibuzo zizokusiza ekutholeni imikhondo okufanele ilandelwe.
Kukhona ama-bots ahleliwe akwenzela lo msebenzi. Lawa mabhothi asiza ekulungiseleleni imibuzo bese ehlaziya izimpendulo azinikezwe ukuthola ukuthi ukuhola kuyalandelwa noma cha. IDriftbot nguDrift inketho ehamba phambili lapha uma ufuna lolu hlobo lwesoftware.
Ngenkathi ama-bots engenza umsebenzi omuhle ngempela ekufanelekeleni nasekukhuliseni ukuhola, indlela engcono kakhulu yokuphatha inqubo ukwengeza ukuthinta komuntu ekugcineni kwesivumelwano.
Indlela ehamba phambili ukuvumela ama-bots ukuthi anakekele futhi afanele ukuhola bese eba nesinyathelo somuntu lapho isivumelwano sesizovala.
Inqubo ingahle ihlanjululwe ukuze ichaze isu lakho lokuthengisa ledijithali ngesikhathi esizayo. Kulula futhi kuzokuvuna.
Isizathu 3: Sebenzisa amaBots Njengezindlela Zokuzenzela Umuzwa Womsebenzisi
Ucwaningo lwakamuva luthole lokho 71 amaphesenti wawo wonke amakhasimende akhetha amasu wokuthengisa enziwe ngezifiso.
Eqinisweni, amakhasimende aphila futhi afela ukwenza ngezifiso, njengoba kubeka ukukhanya kuwo. Sekuyiminyaka, ama-brand athengisa lokho akubona kulula, kepha ama-tide manje aseshintshile futhi sekuyisikhathi sokuba amakhasimende anqume ukuthi kuthengiswa futhi kuthengiselwani kuwo.
Ukhumbula ukuhlukumeza kwamakhasimende ekwenzeni ngezifiso, kufanele uthathe kuwe ukuthi ubanikeze lokho kunaka. Ngokusetshenziswa kwama-bots, unganikeza izimpendulo zamakhasimende kuzivakashi zakho.
I-CNN iyisibonelo sesiteshi sezindaba esiphezulu esithumela okuphakelayo kwezindaba okwenziwe ngokwezifiso kubasebenzisi abahlukahlukene ngokuya ngezintshisekelo zabo nezinketho zabo.
Lokhu kudala isikhala esihle futhi kusiza amakhasimende ancike kumhlinzeki wezindaba ngazo zonke izindaba ezifanele kubo.
Ngokwesakhiwo Isixazululo esihamba phambili se-inthanethi se-AI esisiza amaqembu wezezindlu, ama-brokerage kanye nama-ejenti ukuthuthukisa izimpendulo ezenzelwe wena kumakhasimende abo.
Ingxoxo engaphansi kwesakhiwo ihamba ngegama lika-Aisa Holmes futhi isebenza njenge-ejenti yokuthengisa. U-Aisa Holmes ukhomba amaklayenti futhi aphendule imibuzo yawo ngethoni eyenziwe yaba ngeyakho.
Isizathu 4: Sebenzisa amaBots Ukuxhumana Kwezenhlalo Okusebenzayo
Ungasebenzisa futhi ama-bots kwimidiya yakho yezenhlalo ukuze uphendule futhi uhlanganyele namakhasimende ngokuzinikela okufanayo nokwenza ngendlela oyithandayo kuwebhusayithi yakho.
Kunezingxoxo eziningi ezingatholakala zokunonga imiyalezo yakho kuSlack nakuFacebook Messenger. Ama-bots ezokuxhum asetshenziselwa kangcono ukukhiqizwa kokuhola, futhi ayifeza kahle leyo njongo.
Isizathu 5: Sebenzisa amaBots Njengezindlela Zokunquma Ukubalwa Kwabantu
Ama-Bots anikezela ngendlela enhle kakhulu yokuxhumana ukuze uthole imininingwane edingekayo evela kumakhasimende akho, ngaphandle kokubacela ukuthi bagcwalise amafomu amade futhi adinayo.
I-bot ixhumana namakhasimende akho ngendlela engajwayelekile futhi ikhiqize imininingwane efanele kubantu bayo.
Lolu lwazi lusetshenziselwa ukunikela amasu okuthengisa ngezifiso kumakhasimende. Lezi zindlela zokuthengisa zingaba yindlela enhle yokuletha amakhasimende amasha womkhiqizo wakho.
I-chatbot inikeza isikhala esiphephile kumakhasimende amaningi lapho angabelana khona ngolwazi oluhlobene nabantu babo, ngaphandle kokuzizwa bengavikelekile ngakho.
Ungasebenzisa futhi leli thuba ukuletha amakhasimende amasha futhi uthole imininingwane ehlobene nokubalwa kwabantu kwabadala.
Okwamanje silindele ukuthi uqonde ukubaluleka kwama-chatbots nokuthi ungawafaka kanjani kucebo lakho lokumaketha. Ukumaketha kwedijithali kumayelana nokuba yizikhululekile nokwakha izibopho namakhasimende akho.
Ama-chat bots akunika lelo thuba nje, njengoba akuvumela ukuthi uhlole ama-horizons okungenzeka ukuthi awakutholanga kakhulu.
Amaqembu wokumaketha angasebenza ngokubambisana nama-bots ukwakha isu elisabekayo lokumaketha ledijithali.
Isevisi yokusebenzisana neyamahora angama-24 yama-bots izosebenza kahle ngobuchwepheshe babasebenzi bakho. Ngale amalgam uzokwazi ukuvuna imivuzo yamathuba amakhulu okuthengisa nokuthengisa okuzenzakalelayo.
Ngabe ufuna ukuzama inhlanhla yakho ukufaka ama-bots ngaphakathi kwecebo lakho lokumaketha?
Uma kunjalo, ke phawula ngezansi ukuze usazise ukuthi amasu ethu angakusiza kanjani ohambweni oluzayo.
Tags: b2bbotxhumana nabanganiukuhola isizukulwaneiziqu zokuholaukuhola ukufanelekathola imikhondo
U-Alex ungumphathi Wezokukhangisa ngeDijithali kwa Okuthembekileoft, i-ejensi yezentengiso yedijithali enikela ngezinsizakalo ze-SEO nezentengiso ezidijithali kusukela ngo-2002.